छवटा जर्मन मोडल शब्दहरू प्रयोग गर्दै
जर्मन मोडल क्रियाको बारेमा तपाईलाई थाहा छ
by हाइड फ्लिपो
मोडल क्रियाहरू जर्मन व्याकरण राम्रोसँग आवश्यक छ
मोडल क्रियाहरू संभावना वा आवश्यकता संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ। अंग्रेजीमा हुन सक्छ, सक्छ, अनि, जस्तै मोडल क्रियाहरू छन् । त्यसै गरी, जर्मनको कुल6मोडल (वा "मोडल सहायक") शब्दहरू छन् जुन तपाइँलाई जान्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरू सबै समय प्रयोग गर्दछन्।
जर्मन मोडाल शब्दहरू के हो?
यदि तपाईं यस मोडेल को उपयोग गरेर रहयो हूँ!
(तपाइँ मात्र मोडल क्रिया बिना बिना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न!)
"कैन" ( कोनिन ) एक मोडल क्रिया हो।
अन्य मोडल क्रियाहरू जोगिन असम्भव छ। तपाईं "हुनु पर्छ" ( मुसुन ) तिनीहरूलाई धेरै वाक्यहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। तपाइँ "हुँदैन" ( sollen ) लाई प्रयास नगर्न पनि विचार गर्नुहोस्। तर तपाईं किन "चाहनुहुन्छ" ( wollen ) चाहनुहुन्छ?
के तपाईले ध्यान दिनुभएको छ कि हामीले कति पटक पटक मोडल क्रियाकलाप प्रयोग गर्यौं? यहाँ को लागि हेर्न को लागी छह मोडल क्रियाहरू छन्:
Dürfen - हुन सक्छ, अनुमति छ
können - can, be able
moggen - like
मुसुन - हुनु पर्छ
sollen - हुनु, हुनुपर्छ
wollen - चाहनुहुन्छ
मोडलहरूले उनीहरूको नामलाई अन्य क्रियाकलापलाई परिमार्जन गर्न तथ्यबाट उनीहरूको नाम प्राप्त गर्छन्। यसबाहेक, तिनीहरू सधैँ टिन्डेममा प्रयोग गरिन्छ अर्को क्रियाकलापको अनौपचारिक रूप, जस्तै कि, Iuss morgen नेच फ्रैंकफर्ट फहरन । ( ich muss + fahren )
अन्तमा अनन्तोपचारिक छोडिदिनु पर्दछ जब यसको अर्थ स्पष्ट छ: Ich mussen nach फ्रैंकफर्ट। ("भोलि फ्रैंकफर्टको लागि [जानु / यात्रा] हुनुपर्छ।")।
चाहे अनुपालन वा भनिएको छ, अनन्तकाल को वाक्य को अन्त मा राखिएको छ।
अपवाद जब तिनीहरू अधीनस्थ खण्डमा देखा पर्छन्: एर sagt, dass er nicht kommen kann । ("उनी भन्छन् कि उहाँ आउन सक्नुहुन्न।")
वर्तमान तनाव मा मोडलहरू
प्रत्येक मोडल मात्र दुई आधारभूत रूपहरू छन्: एकल र बहुवचन। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम हो जुन तपाइँले हालको तनावमा मोडल क्रियाहरूको बारेमा सम्झन आवश्यक छ।
उदाहरणको रूपमा, क्रिया कोनिनको मूल रूपहरू क्यान (एकल) र कुन्निन (बहुवचन) छ।
एकल अनुशासनको लागि ich, du, er / sie / es को लागी , तपाइँ क्यान ( डु सामान्यतया यसलाई समाप्त: डु क्यानस्ट ) थप्नुहुन्छ।
बहुवचन उद्धरणको लागि त्यहाँ, ihr, sie / Sie , तपाइँ कर्नेल प्रयोग गर्नुहुनेछ ( ihr ले यसको सामान्य - ending: ihr könnt )।
साथै, जोडा / "कर" मा अंग्रेजीमा समानतालाई ध्यान दिनुहोस् र मूस / "अनिवार्य छ।"
यसको मतलब यो हो कि मोडलहरू वास्तवमा कन्जुगेट गर्न र अन्य जर्मन क्रियाकलापहरूको तुलनामा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईंलाई सम्झना छ कि तिनीहरूसँग केवल दुई आधारभूत अवधारणाहरू छन्, तपाईंको जीवन धेरै सजिलो हुनेछ। सबै मोडल एकै तरिकाले काम गर्दछ: डर्फेन / डराफ, कर्नन / क्यान, मोजन / म्याग, म्यूसन / मस, sollen / soll, wollen / will ।
मोडल ट्रिक्सहरू र विशिष्टताहरू
केही जर्मन मोडलहरू निश्चित नियमहरूमा विशेष अर्थ लिन्छन्। " सान केन डेट ," उदाहरणको लागि, अर्थ "उनी जर्मन जान्छन्।" यो को लागि छोटो छ " से केन डान्स ... स्प्रेचिन / schreiben / verstehen / lesen ।" जिसका मतलब "तिनी बोल्न / लेख्न / बुझ्न / जर्मन पढ्न सक्नुहुन्छ।"
मोडल क्रिया mögen को प्रायः यसको उपजीव रूप मा प्रयोग गरिएको छ: möchte ("चाहनुहुन्छ")। यो सम्भावना, इच्छाधारी सोच, वा राजनीतिकता उपन्यासत्मक मा आम को अर्थ हो।
दुवै sollen र wollen को विशेष मूर्खीय अर्थ मा "यो भनिएको छ," "यो दावी छ," वा "तिनीहरू भन्छन्।" उदाहरणको लागि, " एर फेरी सिभ हुनेछ ," को अर्थ "उनी अमीर हुन दावी गर्छन्।" त्यसै गरी, " सल सोल फ्रान्जोसिन सेन ," को अर्थ "उनी भन्छन् कि उनी फ्रान्सेली हुन्।"
नकारात्मक मा, मुसुन ड्युफेन द्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ जब अर्थ निषेधित छ "होइन।" " अरे तिमी पनि नहीं," को मतलब "त्यो गर्न को लागि छैन।" व्यक्त गर्न, "उसले यो गर्नु हुँदैन," (त्यसो गर्न अनुमति छैन), जर्मन हुनेछ, " एर डरास न्युट टुन ।"
प्राविधिक रूपमा, जर्मनले डर्फेन (अनुमति दिइन्छ) र कोनन (सक्षम हुन सक्दछ) को बीचमा भिन्न भिन्नता बनाउँछ जुन अंग्रेजीले "हुन सक्छ" र "गर्न सक्छ" को लागी गर्दछ। यद्यपि, वास्तविक संसारमा प्रायः अंग्रेजी बोल्नेहरूले "उहाँ जान्न सक्नुहुन्न," "उहाँ जानुहुँदैन" को लागी प्रयोग गर्दछ ((अनुमति छैन), जर्मन स्पिकरले पनि यो भेदलाई बेवास्ता गर्दैनन्। तपाई अक्सर प्राय: " एर क्यान नित गेन " भेट्टाउनुहुनेछ, व्याख्यात्मक सही संस्करणको सट्टा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, " अरे डब गर्न सक्नुहुन्छ।"
विगतको अवधिमा मोडेलहरू
साधारण भूतपूर्व तनाव ( Imperfekt ) मा, मोडलहरू वास्तवमा वर्तमान भन्दा सजिलो छ।
सबै छवटा मोडलहरू नियमित विगतका तीव्र मार्कर जोड्छन् -त्यो अनन्तको स्टेममा।
चार मोडल जसले आफ्नो अनन्त रूपमा इमलाट्स गरेको छ , उमलात साधारण अतीतमा छोडिदिनुहोस् : डर्फेन / डटफटी , कानिनिन / कन्निटे , मोजन / मोच , र मुसुन / संगीत । Sollen sollte हुन्छ ; wollte मा परिवर्तन भोल ।
किनकि अंग्रेजी "सक्छ" ले दुई भिन्न अर्थहरू छन्, यसले तपाईलाई जर्मनमा व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने बारे जान्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ भन्न चाहानुहुन्छ भने, "हामी यो गर्न सक्थ्यौं," "हामी सक्षम छौं" को अर्थमा, त्यसपछि तपाइँ तार कन्टेन (कुनै इमलात ) प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर यदि तपाईं यसको अर्थमा "हामी सक्षम हुन सक्छौ" वा "यो सम्भावना हो," तपाइँले भन्नुपर्दछ, wir könnten (उपन्यासक फारम, umlaut संग, पछिल्लो तनाव फारममा आधारित)।
मोडलहरू हालका सिद्ध सिद्ध प्रपत्रहरूमा धेरै कम प्रायः प्रयोग गरिन्छ (" एर टो टो दास गीकोनन्ट ", "अर्थ त्यो त्यो गर्न सक्थ्यो।")। यसको सट्टा, तिनीहरू सामान्यतया डबल अनंत निर्माणमा लाग्छन् (" एर टो टो दास नजिन सिग्नल ", "अर्थ" उसले त्यो भन्न चाहँदैनन्। ")।
स्पेनिशमा सबैभन्दा लामो शब्द के हो?
सबैभन्दा लामो जर्मन शब्द के हो?
साधारण फ्रान्सेली वाक्यांशहरू
सालिर - माटोमा
जापानी कण: गर्न
जर्मन लान शब्द अंग्रेजी मा
स्पेनीमा 'I Wonder' भनिएको छ
फ्रान्सेली 101: शब्द "केफ-किफ" सिक्नुहोस्
स्पेनिश र अंग्रेजी शब्द संग्रह कम्प्यूटर र इन्टरनेट सर्तहरू
'मल' संग फ्रांसीसी आयोडीमिक अभिव्यक्ति
कसरी कन्जुगेट अनियमित फ्रांसीसी '-र' शब्द 'अफिस'
कसरी फ्रेन्चमा धन्यवाद: Merci et Les Autres Remerciements
तपाईंको BPA मा तपाइँको एक्सपोजर कसरी कम गर्ने
मकवान चन्द्र (ट्रांजिट) - मूड र हप्पिंग्स
सांस्कृतिक संसाधन व्यवस्थापन - एक देशको विरासतको संरक्षण
दोस्रो विश्वयुद्ध: तेहरान सम्मेलन
एक $ एपी रकी जीवनी
नेभिगेसन उपकरण: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को समझना
संघीय शीर्षक I प्रोग्राम विद्यार्थी र स्कूलहरूलाई कसरी मद्दत गर्छ
कुजुर 21 को
आधुनिक नृत्यको विशेषताहरू के हो?
अन्तिम चार साइटहरु: 2013 - 2017
बायाँ ब्रेन प्रमुख छात्रहरूको लक्षण
यूगोस्लाभिया आधिकारिक रूपमा सर्बिया र मोन्टेनेग्रो हुन्छ
10 कुराहरु तपाईंले बोक्नुको बारेमा थाहा पाउनुभएन
खाद्यान्न र खाद्य पदार्थ: के फरक छ?
एक नकली शोर माइक्रोफोन स्पॉटिंग
'कल को जंगली' उद्धरण
तपाईलाई थाहा छ पेरिस बारेमा 1871 को कम्युनिस्टको बारेमा
2009 को शीर्ष देश संगीत गीत
यो ग्रीस ग्रीसमा दूरी नियन्त्रणको लागि ड्रिल राख्ने प्रयास गर्नुहोस्
स्पेनिश सम्भावनात्मक व्युत्पन्न (लामो फाराम)
"बोनी र क्लाइड स्टोरी"
कसरी कन्जुगेट "स्टहेन" (स्ट्यान्ड गर्न) जर्मनमा
10 प्रसिद्ध Raptors जुन Velociraptor थिएन
1984 मा परास्नातक टूर्नामेंट: एक 'भूत' द्वारा प्रेरित विजय
अमीनो एसिड संरचनाहरू